dalalka Muslimka ah oo dibadbaxyo uga jawaabtay go’aankii Trump ee Qudus | Raadgoob
dalalka Muslimka ah oo dibadbaxyo uga jawaabtay go’aankii Trump ee Qudus
December 8, 2017 - Written by admin
xoogagga Israa’iil ee ku sugan deegaanada ay xoogga ku haystaan ee Daanta Galbeed ayaa ka hor tagaya Falastiiniyiin dibad baxayaal ah oo ka careysan go’aankii Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa’iil.
Shaacintii Donald Trump waxaa soo dhoweysay Israa’iil, balse waxaa si adag u cambaareeyay dowladaha Carabta iyo kuwa Islaamka.
Israa’iil ayaa markasta u arakto in Qudus ay tahay caasimaddeeda halka Falastiiniyiinta ay sheegayaan in Bariga Qudus ay tahay caasimaddooda mustaqbalka, halkaas oo Israa’iil ay ku qabsatay dagaalkii lixda maalmood ee 1967-dii.
Laakiin dowladda Mareykanka waxay noqoneysaa dalkii ugu horeeyay ee Qudus u aqoonsada in ay tahay caasimadda Israa’iil oo dowlad ahaan loo aasaasay 1948.
Muuqaallo laga baahiyay telefishinno oo laga duuway Baytullaxam waxay muujinayaan boqollaal qof oo dibadbaxaya oo ay hor taagan yihiin ciidamada Israa’iil.
Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa salaadda Jimacaha ka dib isu soo baxay boqollaal qof oo ku dhawaaqayay “Qudus waa caasimadda Falastiin”, waxayna muujiyeen sida ay u diidan yihiin in ay caasimad u noqoto Israa’iil.
yaa dhankooda walaac ka muujiyay saameynta uu yeelan karo go’aanka Trump.